Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → septembre → 7 → Depiote Brunel Razafintsiandraofa : « Ravao ny zandary, fa lasa hery famoretana fotsiny »
Redaction Midi Madagasikara 7 septembre 2015 3 Commentaires
Mitombo hatrany ny fanehoan-kevitra sy ny fanamelohana ny zandary, taorian’ilay herisetra nitranga teny Ankatso, izany dia na efa nivoaka aza ny didim-pitsarana. Isan’ny nanakiana mafy izany ny Depiote voafidy tany Ikongo, Brunel Razafintsiandraofa. « Amiko dia tsy misy ilaina intsony ny zandary. Ilay fomba nandrafetana sy nametrahana io vondron’ny mpitandro ny filaminana io mihitsy no tsy nety hatrany am-boalohany, ka mahatonga ireo olony tsy mahay manavaka ny hery sy ny herisetra » hoy ny fanehoan-keviny tao amin’ny fandaharana Don-Dresaka. Ny vahaolana, raha araka ny fanazavan’io olom-boafidy ; izay sady kaomiseran’ny pôlisy ihany koa teo aloha, dia ny fampidirana ireo zandary na ho lasa pôlisy na ho lasa miaramila. « Asaina misafidy na hiditra eo anivon’ny Tafika na koa eo anivon’ny pôlisy izy ireo. Ny Tafika dia miaro ny fiandrianam-pirenena ary ny pôlisy kosa dia miaro ny ain’ny olona sy ny fananany. Matetika anefa, dia lasa mitovy sy mifanitsaka ny asan’ny zandary sy ny pôlisy, eny fa na dia hoe samy manana ny faritra iasany aza izy ireo. Koa inona no tsy hanamafisana ny vondron’ny pôlisy raha mitovy ny asa ? » Raha ny fijerin’ity olom-boafidy ity ihany. Notohizany fa matoa ireny mpianatr’Ankatso ireny tonga tamin’ireny fihetsika mahery ireny, dia noho izy ireo tsy mba nisy nihaino mihitsy. « Lasa manao hetsika miharo herisetra izy ireo, mba hanintonany ny sain’ny fanjakana dia ireny hitantsika ireny ny vokany. Raha izaho manokana, dia tsy tokony homena tsiny mihitsy ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, manoloana ireny zava-nitranga ireny » hoy izy namarana ny fanehoan-keviny.
Ravo Tongabe 8 septembre 2015 at 8 h 26 min · Edit
ny service légal no tokony ho foanana voalohany indrindra satria rehefa vita io dia toy ny avy nanofana dahalo ny vahoaka, manaraka izany ny ACMIL dia foanana , tsy misy ilàna officier izany , ny eo aza mitango lalitra fotsiny sy manao CAPSAT.
Sol Feno 7 septembre 2015 at 19 h 59 min · Edit
Tsy ny zandary ihany no tokony ravaina fa io fitondram-panjakana io mihitsy. Tsy misy mandeha amin’izay izy ny fiainana’ny vahoaka, indrindra eo amin’ny lafiny fandriam-pahalemana.
Voalohany, tsy tokony hanao politika mihitsy ny mpitandro filaminana.
Faharoa, miaro ny vahoaka sy miasa ho an’ny firenena no asany fa tsy hoe mandeha mampanofa KALAKY amonona sy anafiana toka-tranon’olona, mitaky ECOLAGE etsy sy eroa.
kotobekibo 7 septembre 2015 at 13 h 51 min · Edit
t@ andron’i Ra8 no efa projet efa saika notanterahina izany fanakambanana bt zandary sy ny polisy izany !!
tena miobon-kevitra mihitsy @ ingahy depiote ny tenako. mitandro ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra no asan’ny zandary fa dia gaga ianao fa ohatran’ny hoe : tsisy afa tsy zandary eto antananarivo rehefa misy fanehoan-kevitry ny vahoaka. Nefa ny dahalo any ambanivohitra mandripaka.
Ny jeneraly raofina @ gony; Mampalahelo ilay firenena.